Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု နောက်တိုးတရားခံသုံးဦး တင်သွင်းရန် လျှောက်ထားမည်
Friends of MoeMaKa – Free Burma News Collection
Supporting democracy and human rights struggle in Burma
88 – Dead & Wounded List
List of Political Prisoners (1988 – 2007)
Submit Human Rights Records
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု နောက်တိုးတရားခံသုံးဦး တင်သွင်းရန် လျှောက်ထားမည်
ရန်ကုန်၊ မေလ ၂၆ ။ ။ ရှေ့နေဦးကိုနီနှင့် အငှားယာဉ်မောင်းကိုနေဝင်းတို့ အသတ်ခံခဲ့ရသည့်အမှုအတွက် နဂါးလေး(ခ) အောင်နိုင်မြင့် ကို တရားလိုပြသက်သေအဖြစ် ခေါ်ပေးရန်နှင့် နောက်တိုးတရားခံသုံးဦး ထပ်ထည့်ပေးရန် ခရိုင်တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြောသည်။
ရှေ့နေဦးရောဘတ်စန်းအောင်မှာ အမှုဖြစ်ပွားစဉ်က ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံသူအား ဖမ်းဆီးရာတွင် သေနတ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့သော အငှားယာဉ်မောင်းကိုနေဝင်း၏ ဇနီး မစုသက်ခိုင်ဘက်မှ ရှေ့နေ အဖြစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှေ့နေဦးကိုနီအမှုတွင် နောက်တိုးတရားခံအဖြစ် သုံးဦးအား လျှောက်ထားမည့်အကြောင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပေါ်ပေါက်ထားချက်အရ လျှောက် ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကပြောသည်။
“ ဒီနောက်တိုး တရားခံသုံးယောက်ကိုတော့ ပြောလို့မရသေးဘူး။ ခဏလေးမြှုပ်ထားသေးတယ်ဗျာ။ မွေးဂဏန်း အနေနဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ သက်သေအနေနဲ့ကတော့ နဂါးလေးကို ထည့်ကို ထည့်မှာ။ နဂါးလေး မပါဘဲနဲ့ ဒီအမှုကို စစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့။ ဆားမပါတဲ့ ဟင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ထမင်းစားရမယ့်ကိန်းဖြစ် သွား လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ နဂါးလေးနဲ့သွားဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်သူက သက်သေပါ ရမယ်” ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ရှင်းပြသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးမှု၊ လုယက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် နဂါးလေး(ခ) အောင်နိုင်မြင့်ဆိုသူမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥပဒေအကြံပေး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံရန် ကျပ်သိန်း၂ဝဝ နှင့် လိုင်စင်မဲ့ ကား တစ်စီးဖြင့် သဘောတူလက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဦးကိုနီအား မလုပ်ကြံဘဲ ပစ္စည်းများယူကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် သေနတ်သမားကြည်လင်းအပါအဝင် လေးဦးအား ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး လက်နက်မှုကို တရားလိုပြသက်သေတစ်ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့ကာ လာမည့် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ကို ထပ်မံချိန်းဆိုလိုက်သည်။
via Home http://ift.tt/2rqvzci http://ift.tt/OTcCHv
This entry was posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ and tagged Feedly, IFTTT. Bookmark the permalink.
ရန်ကုန်စည်ပင်မှ ငှားရမ်းထားသော မြေနှင့်နေရာငှားရမ်းခများ အလွန်နည်းပါးနေဟု ဆို
လုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးချက် NLD ဦးဥာဏ်ဝင်း တုံ့ပြန်မှု
စာပေညီလာခံ ၂၀၁၇ (ပထမနေ့) ရန်ကုန်မြို့၌ စည်ကားစွာကျင်းပ ၊ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ပါဝင် ဆွေးနွေး
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကို အဓမ္မပြုကျင့်တာမှန်ကြောင်း TNLA ပြော
KIO ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် မလိဇွပ်ဇော်မိုင် ကွယ်လွန်
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေ (1)
Armed Groups (2)
Burmese Military – တပ်မတော်ဆိုင်ရာ (178)
Cabinet – အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ (574)
Civil Wars – ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ (849)
Disaster – ဘေးအန္တရယ်များ (154)
Election – ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ (905)
Ethnics – တိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာ (352)
INT'l COMMENTARY (8)
Intelligence – နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ (461)
Kachin States (93)
Land Rights – မြေယာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ရာ (153)
LAWS – ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ (309)
Letpadaung Movement (630)
Luttaw – မြန်မာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ (386)
People Profile (7)
People Profiles (242)
Political Parties – နိုင်ငံရေးပါတီများ (529)
Political Prisoners (28)
Political Prisoners Related (1,309)
Projects – စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ (115)
Recently Read (1,164)
တချိန်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) နှင့် ဦးနု၏ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီတို့၏ ချင...
Kachin-Myanmar Brother-Sister ကချင်မြန်မာ၊ ညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်သည့်ရာဇဝင်
ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ကာလ (၁၉၄၇)
သမိုင်းတွင် ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံး
Books - သောင်းဝေဦး- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတီးဝဲလ်နှင့်မြစ်ကြီးနားတိုက်ပွဲ
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒုက္ခသည် ၈၀၀ ကျော် ထပ်တိုး
နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၂၃ ဦး နှုတ်ထွက်
- by Ko Win - by Thar Gyi 88 Open AAPP (Burma) Armed Groups Borders Cabinet Census Chin Civil Wars Disaster Drugs Education Election Energy Environment Ethnics Feedly Health IFTTT Intelligence Kachin Karen Labor Lands Laws Luttaw Military Mon Monks N Gun Ja Wa NLD People Profile Political Parties Political Prisoners Press Projects Protests Rakhine Recently Read RIghts Shan Trade Uncategorized USDA
November 2015 (271)
September 2015 (183)
July 2015 (439)
February 2015 (299)
July 2014 (451)
March 2014 (1107)
February 2014 (351)
© Friends of MoeMaKa – Free Burma News Collection